Ciidanka dowladda iyo Koonfur Galbeed oo gebi ahaan la wareegay degmada Tiyeeglow ee gobolka Bakool – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Ciidanka dowladda iyo Koonfur Galbeed oo gebi ahaan la wareegay degmada Tiyeeglow ee gobolka Bakool
Wararka naga soo gaaraya degmada Tiyeeglow ee gobolka Bakool ayaa sheegaya in ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay si rasmi ah maanta ula wareegeen degmadaas, kadib markii ay halkaasi isaga baxeeen dagaalyahandda Al-shabaab.
Al-shabaab ayaa muddo bil ka badan gacanta ku haayay degmada Tiyeeglow, ka dib markii ay halkaasi isaga baxeen ciidamada Itoobiya, waxaana saakay dagaal la’aan halkaasi kula wareegay ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Ciidankaasi huwanta ah ayaa maanta lagu dhex arkayaa wadooyinka ku yaala degmada Tiyeeglow, iyagoona durbadiiba dhufeysyo ka sameystay dhamaan wadooyinka looga soo galo degmadaasi, inkastoo dadkii deganaaa halkaasi ay hore uga barakaceen, kadib markii ay qabsadeen dagaalyahanadda Al-shabaab.
Dagaalyahanadda Al-shababaab ayaa intii ay ku sugnaayeen degmada Tiyeeglow waxaa lagu eedeeyay inay dil u geysteen dad rayid ah oo gaaraya ilaa 10 qof, ka dib markii ay halkaas isaga baxeen ciidamada Itoobiya oo hore halkaasi gacanta ugu haayay.
Ugu dambeyntii, mas’uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed oo la hadlay warbaahinta Bulshoweyn ayaa u sheegay in ciidanka dowladda iyo kuwa Koonfur Galbeed ay haatan degmada Tiyeeglow ka wadaan baaritaano culus oo ay ku sameynayaan guryaha ku yaala degmadaas.